Ndepụta Ndị na - emepụta - Akwụkwọ Ahịa B2B - Ozi Ndị Nweta
ebe a na Alietc anyị na-agba mbọ ịmepụta ụwa Ahịa ahịa B2B na-eweta ọnụ emepụta, ndị na-eweta ọrụ na ndị na-ere ahịa, na-enyere aka igosipụta ihe bara uru na ogologo oge, mmekọrịta azụmahịa na-adịgide adịgide.
Igodo nke oganihu dika emeputa nwere ike izu ike n'ọtụtụ ihe ndị mmadụ n'otu n'otu, ụfọdụ metụtara ngwaahịa gị, ebe ndị ọzọ na-emetụta otu i si emeso ndị na - azụ azụ. Iji mee ka ohere ịga nke ọma rụọ ọrụ na Alietc, anyị achịkọtara nke a Ntuziaka onye nrụpụta iji nyere gị aka izere ọtụtụ mmejọ ndị nkịtị na-eme mgbe ị na-achọ rere ahia.
Isi ihe ga-eme ka gị na ndị na-azụ ahịa nwee mmekọrịta na-aga nke ọma bụ ịkagbu nkwa gị
Site na nke a, anyị na-ekwu na ọ ka mma ịbụ ezigbo eziokwu n'oge usoro nhazi oge na ịghara ikwe nkwa ụgha n'ihe gbasara ngwaahịa. Ezigbo mmekọrịta na-arụ ọrụ bụ naanị otu ihe, nke ahụ bụkwa ntụkwasị obi. Iwulite ntụkwasị obi kwesịrị ịbụ ebumnuche gị kachasị mkpa mgbe gị na onye ahịa ọhụrụ na-emekọrịta ihe. Ihe ọzọ dị mkpa bụ na ntụkwasị obi na-abịa na-eguzosi ike n'ihe. Ọ bụrụ na ị na-anapụta oge niile na oge enyere aka, ma ọ bụ tupu oge gara aga, gịnị kpatara onye na-azụ ahịa ga-eji gaa ebe ọzọ, ọbụlagodi maka onye na-enye ngwaahịa yiri nke ahụ na ọnụahịa dị ala 3%?
Tinye uche na njikwa njikwa
O nwere ike ịbụ na onye zụrụ ihe gị arịọla gị ka ị gosi usoro nke ngwaahịa (ị) nke gị emebe. Nlele ndi izipu izipu n’ezie ibu ezi echiche ngwaahịa. Ngwaahịa ọ bụla I zigara onye zụrụ ahịa ahụ kwesịrị ịbụ otu, ma ọ bụ nke kacha mma ma ọ bụghị nhọrọ nke ụfọdụ ka mma, ụfọdụ ka ọ dị na nke kacha mma. You ga-arụ ọrụ njikwa njiri mara mma tupu ibuga iwu ọ bụla iji hụ na onye zụrụ O nweghị ihe ga-eme mkpesa ma ha nata iwu ha. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ibuga na mma, oge na-aga, gịnị kpatara ị ga- eji mee onye zụrụ lee ebe ozo? Ọ dị ọnụ ala karịa ijide onye ahịa karịa inweta nke ọhụrụ.
Gwa ya okwu nke ọma
Nkwukọrịta bụ ihe dị oke mkpa na mmekọrịta azụmahịa ọ bụla, ọ na-abụkarịkwa ezigbo echiche itinye onwe gị na akpụkpọ ụkwụ nke onye na-azụ gị mgbe ọ bịara ịgwa ha okwu. Ọtụtụ mgbe, ndị na-azụ ihe na ndị na-emepụta ihe nwere ike ịdị ọtụtụ puku kilomita site na, na mgbe enyere iwu ma ọ bụ rịọ arịrịọ, na ụbọchị mgbe nke a gasịrị, ọ nweghị ihe dị njọ maka onye zụrụ ya karịa ịgbachi nkịtị. Ma ọ bụ site na ekwentị oku (na-anabata aka nke gị mgbe niile) ma ọ bụ site na ozi ịntanetị, gbaa mbọ hụ na onye zụrụ gị maara ihe na-eme n'usoro ha.
Ozugbo ngwaahịa (ngwaahịa) abịarute, ị ka chọrọ ka gị na onye zụrụ ahịa na-akparịta ụka iji jide n'aka na ha ji 100% nwee obi ụtọ site n'usoro ha. Nke a na-eme ka ha mata na ị jiri obi ha niile hụ maka afọ ojuju ha, ọ ga - enyere gị aka iwepu nsogbu ọ bụla ma ọ bụ mee mgbanwe ọ bụla na iwu ị ga - enwe n'ọdịnihu. Dịka e kwuru na mbụ, jigide onye ahịa karịa nweta otu.
Utationkwụghachi ọnụ gụrụ ihe niile
Lee Alietc anyị ji arụ ọrụ nzaghachi maka ndị na-emepụta ihe, ndị na-eweta ngwaahịa na ndị na-azụ ahịa. Anyị na-agba ndị ọbịa ume ịhapụ nzaghachi n'eziokwu banyere mmadụ / azụmahịa ha na-eme. Nzaghachi a dị mkpa, ma ị bụ onye zụrụ ahịa ma ọ bụ onye na-ere ahịa, ka ọ bụrụ na aha gị ga-adịkwu mma, ndị mmadụ ga-achọ ịmatakwu ahịa.
Maka mmadụ ọ bụla ma ọ bụ azụmahịa ọ bụla ị na-eme, ị kwesịrị ị na-eche mgbe niile iji kpuchido aha gị na ịchọ ka ha hapụ gị nyocha 5 * na-enwu gbaa oge ọ bụla gị na ha na-azụ ahịa. Ọ dị mfe inweta ha, kwa EA $$$$$$$$$$$ Y iji mee ka ego gị na-enweta site na alietc.com
Ndepụta aha (s) ngwaahịa gị na Alietc
Anyị enyela gị ngwaọrụ niile ịchọrọ iji mepụta ndepụta ngwaahịa na-ejide anya. Agbanyeghị, ihe ị na-ekwu na ihe onyonyo ị họọrọ iji dịịrị gị.
Anyị na-akwado gị ka ị kọwaa nke ọma ngwaahịa ọ bụla ịre ere na-eche nke ọma, na-echeta itinye ozi nke ndị na-azụ ahịa nwere ike ịmasị.
Ekwula okwu ụgha ma ọ bụ ụbọchị nnweta. Ọ bụghị naanị na nke a ga - eduga ndakpọ olileanya maka onye zụrụ gị, mana ọ ga - ahụ ka ha họọrọ ịme azụmahịa ebe ọzọ.
Biko mara na ọ bụrụ na anyị na-enweta mkpesa ugboro ugboro banyere onye nrụpụta, agaghị ekwe ka ha nọgide na-eji ire ahịa Alietc.
Ọnweghị ihe na-akụ ihe oyiyi dị elu. Will ga-ahụ n’okpuru nhọrọ ndepụta ị nwere ike ịgụnye otu, ma ọ bụ ọtụtụ onyonyo nke ngwaahịa ịchọrọ ire. Site na foto dijitalụ nke oge a enweghị ihe ngọpụ maka foto na-adịghị mma.
Họrọ otu esi ere ahia gị na Alietc
Options nwere nhọrọ n’ụzọ ị na-akwalite ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na mpaghara oke asọmpi, ịnwere ike ịchọ ikpughe ọnụahịa gị, ma ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ na ị na-enye ego dị oke mma maka nnukwu / ikwugharị iwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ị ghara ikwe ka akụ na ụba nke ihe dị, mgbe ahụ kọọ "Kpọtụrụ anyị maka ọnụahịa kachasị mma". Nke a na - arụkwa ọrụ nke ọma maka ngwaahịa nke uru ha nwere ike ịgbanwe dabere na ndị ahịa ahịa na ọnụahịa nke ngwaọrụ.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike inye ngwaahịa gị site na ịrịọ maka onyinye mana ịnyeghị ọnụahịa (ọ bụ ezie na ntuziaka ọnụahịa nwere ike ịba uru). Mee ka ndị mmadụ kwupụta ngwaahịa gị na otu ị ga - esi mepee mkparịta ụka, ihe na - agaghị ekwe omume mgbe ị na - enye ọnụego kwụsịrị.
Atre ahịa ọnụahịa nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ịmara na ọnụahịa gị dị oke asọmpi, ma ịchọrọ iti ndị asọmpi gị.
Inweta arịrịọ sitere n’aka ndị na-azụ ihe
Ngwaahịa niile edepụtara ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gị mepụtara gị ga-adị na igwe nchọta anyị. Dịka nsonaazụ, ọ bụrụ na onye zụrụ ahịa na-achọ otu ngwaahịa ma hụ ka ị na-emepụta ya, ha ga-enwe ike izitere gị arịrịọ maka ọnụahịa.
Chohọrọ ọkwa otu gị
Anyị ekepụtala usoro otu atọ, otu n'ime kwesịrị ị dabara gị nso. Nhọrọ nke ndị otu gị ga-adabere na oke azụmaahịa yana ọnụọgụ ngwaahịa ịchọrọ ire na nyiwe Alietc. Anyị chọrọ ka ị sonye na nyiwe Alietc iji hụ na ị bụ nnukwu ụlọ ọrụ na ngwaahịa (s) ị na-ere maka ire bụ ezigbo. Nke a na-arụ ọrụ gị nke ukwuu ka uru gị dị ka ọ dị na Alietc ịgaghị asọ mpi megide ụlọ ọrụ na-akwụghị ụgwọ.
Site na akwa ruo na seramiiki, arịa ụlọ ọsụsọ, ihe elektrọnik na ihe ọ bụla, ihe ọ bụla ị na-emepụta, isi ihe ga-aga nke ọma n’azụmahịa gị bụ inweta ezigbo ndị ahịa, dị njikere ma zụta nke ngwaahịa gị.
Ma ọ na-emepụta ihe ịtụrụ, ma ọ bụ na-emepụta ngwaahịa ịre n’ahịa a na-ere ere, Alietc nwere ike, ọ ga - enyere gị aka. Nchọpụta dị mkpirikpi nke webụsaịtị anyị ga - egosi gị otu mbọ anyị siri jikọta ndị na - azụ ahịa na ndị na - eweta ngwaahịa na ndị nrụpụta, ọkachasị ndị na - emepụta ngwaahịa a kapịrị ọnụ.
Olee otu anyị ga-esi mezuo nke a? Site na iji njikwa ngwa ahịa SEO kachasị mma (nyocha njikarịcha njikwa), anyị nwere ike ijide n'aka na ndị na-azụ ngwaahịa gị maara nke ịdị adị gị na ihe ị ga-enye.
Ihe dị mkpa dịkwa mkpa bụ ịghọta na ị nwere njikwa nke otu esi ere ndị ahịa gị, kakwa onye kwụ ụgwọ ya. Ahịa nwere ike ịgbanwee abalị ma nwee ikike na ngwaọrụ ịmeghachi, ozugbo, ịgbanwe ahịa ga-ahụ na ị ga-enweta nsonaazụ ịchọrọ, oge na oge ọzọ.
Nke mbu, ikwesiri idebanye aka n’ime otu n’ime anyi atụmatụ otu
Bido na ere!
Ozugbo i mecharachara profaịlụ gị, ugbu a ị nọ n'ọnọdụ ịmalite ire ngwaahịa gị, nke anyị mere ka ọ dị mfe omume. Mma nke Alietc bụ na anyị chọrọ ịme ihe niile ka ọ dị mfe ma dịkwa mma, yabụ ị nwere nhọrọ abụọ, ma ọ bụ ị nwere ike ibuga nhọrọ abụọ ahụ.
Detuo ngwaahịa (s) gị maka ọrịre. Mgbe ịdepụtara ngwaahịa gị, ịgunyeghị ọnụahịa ahụ. Egosiputaghi onu ahia a bu n’ihi na anyi kwenyere na inwe ikike ikwurita uka dabere na otutu ndi n’aho ahia kariri nke oma ma nweta ihe oma n’ile anya ma ndi n’ere ahia. Olu olu na oge ihe bu ihe abuo nke nwere ike imetụta onu ogugu, ya mere odighi uche ma ikwusi onwe gi ike na otu onu ego. Ngwaahịa niile edepụtara ga-agụnye arịrịọ “Kpọtụrụ onye nrụpụta” maka ndị na-azụ ya iji mepee mkparịta ụka. Na mbu, arịrịọ ahụ ga-abịakwute anyị ebe a na Alietc ma ozugbo anyị nyochara izi ezi nke onye ahịa ahụ, a ga-enye ha nkọwa kọntaktị nke gị, ị nwekwaara onwe gị na onye na-azụ ahịa ka gị na ya kparịta ụka.
Lelee Azụ arịrịọ. N’adịghị ka ahịa ahịa dijitalụ ndị ọzọ, Alietc na-agba ndị na-azụ ahịa ume ka ha bipụta arịrịọ maka ngwaahịa. Ha ga-agwa gị ụdị ngwaahịa ha chọrọ na oge enyemaka ha chọrọ. Inwere ike itinye 'bidoro'. Ọ dị mfe! Ọ bụrụ na i chere na onye na-azụ ahịa hapụrụ ozi dị oke mkpa, anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị na ndị na - azụ ya ka i wee nwee ike ịkọwa nke ọma.
Otu ebe ahia B2B DIGITAL, 105 Asusu di iche
Mgbanwe a na-agbanwe mgbe niile na teknụzụ yana uru ya dị iche iche emeela ka ALIETC rụọ ọrụ site na weebụsaịtị weebụ nke nwere asụsụ dị iche iche 105, gụnyere Chinese, German, Arabic, na French.
Echiche dị n’etiti ọtụtụ asụsụ a nwere ọtụtụ asụsụ bụ ime ka ịzụta ihe na ịchụ ngwaahịa dị mfe ma dịkwa mma maka onye ọ bụla, agbanyeghị mba gị.
Mgbe onye na-eweta ngwaahịa biputere ngwaahịa, a ga-atụgharị nkọwa ya ozugbo n'asụsụ 105 dị iche iche, na weebụsaịtị weebụ 105.
Usoro ngwa ngwa, akpaghị aka ga - eme ka ị nweta ndị ahịa na - abawanye si mba dị iche iche n'ofe ụwa niile, si otú a na - emeghe ụzọ maka ihe ịga nke ọma site na ahịa ahịa na - aga nke ọma nke na - elekwasị anya na mkpa nke ịbanye na ngalaba ndị ọrụ.
Alietc - Nke kariri karịa n’ahịa ịntanetị
Copyright 2020 © Alietc.com B2B Marketplace & Directory, Ikike niile echekwabara. T&C - PP